▷ Shirkadaha Tiknoolajiyada qaarkood waxay garaacaan badhanka hakadka marka ay shaqaaleysanayaan - 【 Isbarbardhigga Farsamada 】 2022
Salesforce ayaa sida muuqata ah shirkaddii ugu dambaysay ee joojisa shaqaalaynta iyadoo warbixinnada shaqo qorista la xayiray iyo shaqo ka fadhiisin ay kor u kaceen shaqaalaha tignoolajiyada. Shirkadaha Twitter, Meta iyo Uber ayaa ka mid ah shirkadaha sababo kala duwan u jaray shaqaaleysiinta todobaadyadii la soo dhaafay, iyadoo ay jirto sare u kaca sicir bararka iyo iibinta suuqyada saamiyada.
"Tan iyo bilowgii masiibada, ururradu waxay xoojiyeen isbeddelkooda dhijitaalka ah si ay u taageeraan hababka cusub ee shaqada iyo gaaritaanka macaamiisha," Jamie Kohn, agaasimaha cilmi-baarista ee ku-dhaqanka agabka aadanaha ee Gartner ayaa yiri. "Shirkadaha tignoolajiyada ayaa wax walba udub dhexaad u ahaa. Hadda waxay qaadayaan tillaabo ay dib u qiimaynayaan waxay u baahan yihiin koritaanka mustaqbalka. Sidaa darteed, dhaxan kuwanu waxay u badan yihiin hakad waqti gaaban ah.
Qaboojinta shirkadaha tignoolajiyada ee waaweyn ayaa si weyn uga soo horjeeda jawiga shaqaalaynta ee shaqaalaha tignoolajiyada, iyada oo ay sii socoto yaraanta kartida.
"Ka baxsan warshadaha tignoolajiyada, baahida loo qabo shaqooyinka tignoolajiyada ayaa weli ah mid aad u sarreeya," Kohn ayaa yidhi. "Shirkado badan ayaa wali ku dhibtoonaya inay qortaan kartida ay u baahan yihiin si ay u daboolaan baahidooda tignoolajiyada ee sii kordheysa. Shaqaalaha tignoolajiyada ayaa weli haysan doona fursado badan oo suuqa shaqada ah, xitaa haddii aanay ka shaqayn shirkadaha tignoolajiyada ee waaweyn. »
Bixiyaha software-ka Cloud Salesforce ayaa hakin doona qorista meelo gaar ah si loo xoojiyo kharashka, sida ku cad xusuus-qor gudaha ah oo uu arkay Business Insider. Qaar ka mid ah ganacsiyada ka baxsan goobta iyo safarka shirkadaha waa la baajin doonaa, sida lagu sheegay warbixinta Arbacada. (Bayaan ay soo saartay, Salesforce waxay ku sheegtay inay wali rajaynayso inay shaqaaleysiiso 4.000 oo shaqaale rubuckan.)
Milkiilaha Facebook Meta ayaa sidoo kale qorsheynaya inuu joojiyo shaqaaleysiinta cusub ee qaar ka mid ah jagooyinka injineernimada, sida laga soo xigtay Verge, kaas oo helay duubista kulan gudaha ah ee shirkadda. Joojinta shaqaalaynta ayaa daba socota go'aanka lagu dhimayo kharashaadka meelaha qaar horaantii faafitaanka COVID-19, oo ay ku jiraan abuurista muuqaalada wicitaanka muuqaal iyo maqal si loogula tartamo Soo-dhoweynta iyo sifooyin dukaameysi oo cusub.
Shirkaddu waxay hore ugu wargelisay shaqaalaha inay doonayso inay hakiso shaqaaleysiinta qaybteeda injineernimada inta ka hadhay 2022, sida ku cad qoraalka shirkadda oo ay aragtay Business Insider horaantii bishan. Meta CFO David Wehner wuxuu soo xigtay hoos u dhac "warshadaha oo dhan" mid ka mid ah sababaha go'aanka, oo ay weheliso duulaanka Ukraine iyo isbeddelada qarsoodiga ah ee xogta.
Faahfaahinta shaqo joojinta ee Twitter ayaa sidoo kale soo baxday usbuucii hore, iyadoo shirkadda warbaahinta bulshada ay isku diyaarinayso 44 bilyan oo Yuuro oo ay kula wareegayso Elon Musk, in kasta oo aan hadda la filayn in shaqada laga ceyriyo, sida ku cad email-ka gudaha ee shirkadda ay aragtay The Verge. Shirkadda ayaa sidoo kale shaqada ka ceyrisay madaxda sare Kayvon Beykpour, oo ahaa agaasimihii hore ee alaabta macaamiisha, iyo Bruce Falck, madaxa dakhliga. Musk ayaa lagu soo waramayaa inuu soo bandhigay shaqo dhimis bilow ah soo bandhigiddiisa si uu lacag ugu ururiyo soo iibinta shirkadda, ka hor inta uusan kordhinin shaqada sannadaha soo socda.
Iyo Talaadadii, Coinbase, oo ah isweydaarsiga cryptocurrency, ayaa ku dhawaaqay in ay dib u celin doonto qorshaheeda shaqaaleysiinta gardarrada ah sanadkan sababtoo ah hoos u dhaca suuqa ee dhowaan.
"Markii aan ku soo dhowaanay sanadkan, waxaan qorsheynay inaan saddexjibaarno xajmiga shirkadda," ayuu yiri Emilie Choi, madaxweynaha iyo COO ee Coinbase, boostada blog. "Marka la eego xaaladaha suuqa ee hadda jira, waxaan aaminsanahay inay caqli-gal tahay in la dhimo shaqaaleysiinta iyo dib-u-qiimeynta baahida shaqaaleysiintayada oo ka soo horjeeda ujeedooyinka ganacsi ee ugu sarreeya."
Madaxa Uber Dara Khosrowshahi ayaa sidoo kale shaqaalaha uga warbixiyey qorshayaasha lagu dhimayo kharashaadka oo loola dhaqmo shaqaaleysiinta sida "mudnaan iyo ula kac marka iyo meesha aan ku dari doono shaqaalaha," sida ku xusan email uu arkay CNBC todobaadkii hore. Khosrowshahi wuxuu soo xigtay "isbedelka seismic" ee xaaladaha suuqa.
Inkasta oo sababaha hoos u dhaca shaqaalaysiinta ay ku kala duwan yihiin shirkadba shirkad, qaar badan ayaa si taxadar leh u socda marka la eego xaaladaha dhaqaale ee sare iyo rajooyinka hoos u dhaca sanadkan dambe, ayuu yiri Jack Gold, aasaasaha iyo maamulaha guud ee J. Gold Associates, LLC.
"Maadaama ay kuwani yihiin shirkado dadweyne, waa inay ciyaaraan ciyaarta 'Sidee u dhacday rubucii? iyo saamilaydu waxay si dhow ula socdaan kharashyada marka iibku aanu korin. Markaa taasi waa qayb weyn oo ka mid ah hakinta/yaraynta xaaladda shaqaalaynta,” ayuu yidhi.
Isla mar ahaantaana, wuxuu yidhi, shirkado badan oo tikniyoolajiyadeed oo waaweyn ayaa ku daray tiro aad u badan oo shaqaale cusub ah sanadkii la soo dhaafay ama labadii sano ee la soo dhaafay intii lagu jiray masiibada iyadoo “iibku uu kordhay suuqana uu sare u kacay.
"Marka la yaab maaha in ay ku jiraan hoos u dhac shaqaaleeysi si ay si buuxda ugu nuugaan shaqaaleysiinta cusub ee ururka," ayuu yidhi. "Waxay qaadataa lix ilaa 12 bilood in shaqaale cusubi si buuxda uga soo dhalaalaan shaqooyinka cusub."
Shirkadaha kale ee warshadaha tignoolajiyada ayaa aad uga sii gudbay waxayna go'aansadeen inay jaraan shaqooyinka. Iyada oo ay hoos u dhacayaan tirooyinka macaamiisha, Netflix waxay shaqada ka joojinaysaa 150 shaqaale, ama 2% xooggeeda Mareykanka, iyo sidoo kale 70 boos oo waqti-dhiman ah, sida laga soo xigtay Kala duwanaansho.
Madal ganacsi e-commerce Robinhood ayaa shaqada ka joojisay 10% bishii Abriil, halka wadashaqeynta bixiyaha software Mural iyo iibiyaasha baabuurta ee Carvana ay ka mid yihiin kuwa kale oo dhowaan hoos loo dhigay. In ka badan 80 shirkadood oo teknoloji ah ayaa shaqada ka fadhiisiyey ilaa hadda sanadkan, sida laga soo xigtay goobta dabagalka shaqada ee Layoffs.fyi.